जो २ लाख २७ हजारको साईकल चढ्छन् » Farakkon
सोमबार, माघ ६, २०७६ १७:०६
दाङ, पुस ६ । तुलसीपुका एकजना साईकिलिष्ट दुई लाख २७ हजारको साईकल चढ्दै आएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ का खुमबहादुर न्यौंपानेले चढ्ने साईकल दाङमा हालसम्मकै सबैभन्दा महंगो साईकल हो ।
साथी भाईका बीच ‘केबी’को नामले चिरपरिचित ४७ बर्षीय न्यौपाने एकजना सफल व्यवसायी पनि हुन । उनले चढ्ने यो साईकल जर्मन ब्राण्डको ‘कार्वन फाईबर’ हो । यो साईकल हलुंगो हुनुका साथै फोल्ड गरेर व्यागमा राखेर बोकेर हिड्नपनि मिल्छ ।
‘मैले चढ्ने जस्तै साईकल नेपालगञ्जमा एकजना संग छ,त्यो बाहेक पश्चिममा कसैसंग भएको थाहाँ छैन,’ केबीले भने । उनले यो साईकल काठमान्डौंवाट किनेका हुन । केबीको घरमा अर्कोपनि एकलाख पाँच हजार मुल्य पर्ने ट्रिङ्स कम्पनीको ‘वान ईलाभेन’ साईकलन पनि छ । त्यो उनका छोरा रञ्जित चढ्छन् ।
विदाको दिन छोरासंगै साईक्लिङ
विदाको दिन वा शनिवार बाबु–छोरा साईक्लिङ गर्दै टाढा–टाढा पुग्ने गरेको केबीले बताए । ‘छोरा व्याचलर फोर्थ एयरमा पढ्दै छ, म व्यापार गर्छु,’ केवीले भने ,’ केवीले भने ‘त्यसैले हामी बाबु–छोरा शनिवार वा बिदाको दिनमा साईकल चलाएर टाढा–टाढा सम्म पुग्छौं।’ टिन एजर छोरालाई बाबुले साईकल चलाउँदा हुने फाईदका बारेमा अवगत गराएपछि उनीपनि साईक्लिङतर्फ आकर्षित भएका छन् । केवीले आफुले पनि किशोर अवस्थादेखि नै साईलक चलाउन थालेका हुन ।
जतिबेला विद्यालय जाँदा आउँदा साईकलको विकल्प पनि थिएन । तुलसीपुर ११ मोतिपुरवाट अमरमावि उरहरी पढ्न जाँदा होस वा तुलसीपुरको महेन्द्रमाविमा पढ्न जाँदा उनले साईकल नै चढेर जान्थे । त्यसपछि कलेज पढ्दाका धेरै वर्षहरु उनी मोटर साईकल नै चढे । अब भने उनले स्वास्थ्यको लागि साईकिल चढ्ने गरेका छन् ।
केबीले युवा पुस्तालाई मोटरसाईकलवाट साईकलमा डाईभर्ट गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए । ‘युवालाई २२० प्लसर हैन, बरु राम्रो साईकल किन्न प्रेरित गरौं,’ केबीले भने ‘त्यसले स्वास्थ्य, वातावरण र पर्यटनमा समेत मद्दत गर्छ।’ एउटा मोटरसाईकल चढ्दा सरदर कम्तिमा दैनिक एक लिटर पेट्रोल खर्च हुन्छ ।
महिनाको ३ हजार ३३ सयजति पेट्रोलमै जान्छ । त्यो पेट्रोलवाट निस्कने कार्वनडाई अक्साईड र कार्वन मोनो अक्साईड मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्छ ।
स्वाथ्य र वातावरणको लागि साईक्लिङ
दाङ जिल्ला साईकल क्लवका उपाध्यक्ष समेत रहेका केबी न्यौंपानेले स्पोर्टको रुपमा साईक्लिङ गर्न लागेको धेरै भएको छैन ।
तरपनि उनले यो अवधिमा थुप्रै स्थानहरुमा यात्रा गरिसकेका छन् । गत साउनतिर मात्रै उनी साथीहरु संग तुलसीपुरदेखि लमहीस्थित जखेडा ताल पुगे । तुलसीपुरदेखि बबई गाउँपालिकाको पुरन्धरा झरनामा तीन पटक साईकल चढेरै पुगिसकेका छन् ।
गत मंसिर ४ गते मात्रै उनी ग्रुपमा काठमान्डौंको पशुपतिदेखि धनुसा जिल्लाको जनकपुरसम्मको दुरी साईक्लिङ गरे । त्यो यात्रा पुरागर्न तीन दिन लागेको रहे छ । गतवर्ष बुटवलदेखि पाल्लाको रानी महलसम्मको यात्रा गरेका छन् ।
केबी दैनिक विहान एक डेढ घन्टा नियमित साईकल चढ्छन् । ‘विहान साढे ४ बजेदेखि करिव ६ बजेसम्म म नियमित साईकल चलाउँछु,’ केबीले भने ‘कहिले काँही म रन पनि गर्छु।’ नियमित साईकल चलाउन थालेपछि शरिरको तौत एक वर्षको अन्तरालमा झन्डै १० किलो घटेको केबीले बताए ।
‘म ८६ किलोवाट घटेर हाल ७५ किलोमा झरेको छु,’ केवीले भने ‘अब त जति साईकल चलाउएपनि थकान महसुश हुँदैन।’
तुलसीपुर–घोराही फोर लेनमा साईकल छुट्टै लेन आवश्यक
साईकिलिष्ट केबीले हाल आफुलाई तुलसीपुरदेखि घोराहीसम्मको यात्रा गर्न सवा घन्टा लाग्ने गरेको बताए ।
तर, उक्त सडक खण्ड साईकल चढाउनेहरुका लागि निकै जोखिम युक्त छ । कारण छुट्टै साईकल लेन छैन । ‘ठूला गाडीको चाप धेरै छ । उनीहरुले साना गाडी त के कुरा,साईक्लिङ गर्नेलाई झनैं हेपेर गाडी चलाउँछन्,’ केबले भने ।
उनले ठूला साना सबैलाई समान सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने तर्क गरे । त्यसका लागि हाल विस्तार भइरहेको तुलसीपुर–घोराही सडक खण्डमा छुट्टै साईकिल लेन बनाउन अति आवश्यक रहेको उनको कथन छ ।
तुलसीपुर क्षेत्रमा उत्कृष्ट साईकल रुट कहाँ बन्न सक्छ ?
केबीले साईक्लिङ गर्दा थोरै उकालो र प्रेसर हुने बाटोमा मज्जा हुने बताए । ‘म त प्राय त्यस्तै बाटोमा साईक्लिङ गर्छु, गज्जवको शारिरीक अभ्यास हुन्छ,’–केबीले भने ।
उनले तुलसीपुर क्षेत्रमा साईकिल लेनका लागि केही स्थानहरु जिल्लाकै उत्तम स्थानहरु हुन सक्ने संभावना औंल्याए ।
तुलसीपुर ३ दमारगाउँदेखि लाहुुरे चौर, पर्सेनीदेखि वनहरी र वनहरीदेखि रक्षाचौर सम्मको रुट साईकल लेनका लागि उत्कृष्ट गनतब्यका रुपमा विकाश गर्न सकिने उनले सुझाए ।
3 प्रतिक्रिया “जो २ लाख २७ हजारको साईकल चढ्छन्”
Purna bahadur oli says:
यहाँको साइकल यात्रा सफल रहोस
Hb barma says:
Ramro partikiriya kb sir….
nanda pokhrel says: